Friday November 12, 2021 - 07:30:59
Warbaahintu waa aalad saameyn ku leh ra'yal caamka bulshada, waxaa loo adeegsaday abuurista kacdoono bulsho, ridista dowlado, shakhsiyaad, iyo hurinta colaado. Waxey dad badani u arkaan iney saxaafadu tahay mihnad mushahar lagu raadsado, halka qaar kalena ay u arkaan goob ay tahay in dadka looga faa'ideeyo, garaadkooda lagu kobciyo, dadka ka shaqeeyana ay tahay iney shaqadaas u gutaan si xilkasnimo ah.
Waxaan si dhow ula socday warbaahinta Soomaalida 20-kii sano ee lasoo dhaafay, waxey soo martay heerar kala duwan oo mudan in aqoonyahanka Soomaaliyeed ay wax ka qoraan.
12-kii sano ee ugu dambeeyay waxaa kusoo biiray saxaafada Soomaalida warbaahin ka duwan kuwii horey Soomaalidu u garaneysay.
Waxaa dad badan la yaab ku ahaa idaacad ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab oo kusoo biirtay masraxa warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan dhageystay warar, barnaamijyo, faalooyin iyo duruus diineed idaacadu baahisay. Hadalheynta Andalus ayaa lixaadsatay kadib markii xarumo dhowr ah ee ay laheyd ciidamada Mareykanku la beegsadeen duqeymo dhanka cirka ah. Waxaan iswaydiiyay waxa dowlada Maraykanka ku qasbay inay beegsato xarun idaacadeed?!
Waxey duqeymahaasi igu bixiyeen inaan diraaso ugu laabto wararka, barnaamijyada, iyo duruusta ay baahiso idaacada, waxey aheyd tajrubo aanan u fududeyn inuu wax ka qoro qof qurbajoog ah sideydoo kale, duruufaha nagu xeeran aawadeed, waxaan ku dhiiranayaa inaan qormadan kooban is barbardhigo faraqa u dhaxeeya warbaahinta Al-Shabaab iyo tan Dowlada Soomaaliya, BBC-da iyo VOA-da.
Andalus oo ah warbaahin Xarakadu leedahay ayaa loogu magac daray dhul islaamku uu ka talinayey wax badan 800 oo sano inta aysan gaalada reer Yurub la wareegin. Magaca loo dooray ayay khubaradu warbaahintu aaminsanyihiin inuu koobay ujeedada loo aasaasay idaacada, ururkuna u taagan yahay hirgelintooda. Waxaan qaxooti ku ahay dhul uu maalin islaamku ka talinayey, waxaa laga tirtiray wax walba oo ku tusaya in ay muslimiintu maalin ka talin jireen. Wuxuu magacu iga qaatay waqti dheer si aan u akhriyo waxna uga fahmo taariikhda Andalus, waxaa igu beermay dareen qurbo joog ah oo ka duwan, kana xoog badan, kii aan horey ula daalaa dhacayey.
Mudo dhowr bilood ah oo aan ku taxnaa dhageysiga iyo daawashada fariimaha ay soo gudbiso Xarakada Al-Shabaab, ayaan doonayaa inaan akhristaha hor dhigo 5 qodob oo ay warbaahina Al-Shabaab la gaar tahay.
1.Erey Bixino Saxabaadu Isticaamli Jirtay:
Waxay igu aheyd la yaab markaan maqlay ereyada ay ka mid yihiin " Mujaahid, murtad, kufaar, saliibiyiin iyo kuwo kale”. Waxaan dareemay heerka ay gaarsiisan tahay colaadda Shabaabku u qabaan Dowladda Faderaalka Soomaaliya, waxaan garowsaday inuusan dagaalku aheyn mid lagu doonayo in lagu abuuro jawi wada hadal oo horseeda awood qeybsi siyaasadeed iyo dhismaha dowlad wadajir ah. Ereybixinada aan maqlay ayaa ahaa kuwo dhiig ka da’ayo, isticaamlkooduna uu ku cusbaa warbaahinta Soomaaliyeed. Ereyadaan salka ku leh diinta islaamka ayaa dagaalkan ka dhigaya mid caqiido salka ku haya, waxaan dib u xasuustay in ereyadaasu ahaayeen kuwii Rasuulkeena suuban naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee iyo saxaabadiisu adeegsan jireen quruuntii fadliga badneyd. Markey duntay khilaafadii islaamka waxaa la dumay dhamaan wax kastoo ay ummada muslimka ah ku dhaadaneysay. Waxaan isweydiiyay tallow waraabaahin Soomaaliyeed oo adeegsan kartaahi ma jirtaa! jawaabta idinka ayaan idiin daayey.
2.Astaan Aan Music Aheyn Iyo Barnaamijyo Aan Caweys Laheyn:
Wiilkeyga yar ee Maxamed oo in badan ila dhageystay ayaa i weydiiyay: "Aabe idaacada aad dhegysanaysid ee music la’aanta ah, yaa iska leh?” waxey aheyd su’aal igu adkaatay jawaabteeda, iguna bixisay inaan qormadan sameeyo, ma ahan inaan garan waayey jawaabta aan siin lahaa Maxamed-yare, balse waxaa filanwaa igu noqotay degdega uu ku dareemay wiilkaas 7 sano jirka ah, waxey i dareensiisay nolosha liidata ee yurub ka jirta, waxaa la yaab ku aheyd Maxamed yare in dunida laga helayo idaacad aan music ka baxeynin, barnaamij heeso iyo caweys-na laheyn, waxey sidaasi ku noqotay waxyaabaha ay gaarka la tahay warbaahinta Al-shabaab marka loo eego tan dowlada. Waxaan ugu jawaabay Muxammad: "aabe waa idaacad ay leeyihiin muslimiin”, wuxuu bilaabay inuu I weydiiyo su’aalo aan dhamaad laheyn: "xagey joogaan, maan u tagno ama noo yimaadaan” su’aalaha caruurta aan hakadka laheyn dhibka ay leeyihiin, waxaa garan kara waalidkastoo haya caruur da’daas jirta? Ogna jawabta uu bixiyo iney saameyn ku lahaaneyso noloshiisa iyo tan qoyskiisa.
3.Wareysi Laga Qaado Naftii Hure Daqiiqado Uga Harsan Tahay Nolishiisa:
Waa dhacdo naadir ah iyo wareysi gaar ah, waxaa kugu beermaya shucuur cabsi, deganaansho iyo inaad dhuuxdid hadaladiisa, waxaa ka muuqda wejiyadooda farxad gaar ah iyo kalsooni xad-dhaaf ah, waxey aaminsan yihiin iney naftooda u hurayaan wax mudan in loo huro, waxaan aad uga fakaray waxa ku kalifaya? Jawaabtaan u heley waxey aheyd oo keliya:" iney yaqiinsadeen inuu jiro wax ay ilaashanayaan oo uga qaalisan naftooda…waa diintooda iyo mabaad’ida ay xambaarsan tahay”.
Aad ayey u adag tahay inuu qofku naftiisa bixiyo, waana arin noolaha oo dhan isku waafaqsanyahay. Waxaa yurub ina keenay waa nafta inaan badbaadino balse ayaan darada ina qabsatay ayaa ah: inaanan ka fakarin marnaba badbaadinta diinteena iyo tan ubadkeena, waxaan soo galnay hayyaan tiih, oraahdaas waxaa maanta dareemaya waalidkasta oo ubadkiisu joogaan yurub xog-ogaalna u ah xaalada lagu noolyahay.
Ma jirto warbaahin Soomaaliyeed oo ku dhiiran karta iney sii deyso wareysiga qof naftii hure ah oo daqiiqado uga dhiman tahay noloshiisa.
4.Kootada Dumarka Oo Aan Ka Muuqan Warbaahintooda.
Warbaahinta Alshabaab intaan dhageysanayey kama aana helin codka weriya dumar ah oo tebineysa warar ama soo gudbineysa barnaamijyo. Waxaan garowsaday isbadelka Shabaabku ay doonayaan iney dalka ka hirgeliyaan baaxadiisu inta ay le’egtahay. Waxaan dhageystay barnaamij taxane ah oo ay baahiyeen bishii Ramadaan oo ay uga hadlayeen dowrka dumarka ee halganka ay wadaan, waxey ku muujiyeen iney siinayaan xuquuqdii ay siiyeen Ilaahay iyo Rasuulkiisa suuban naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato, waxey gaashaanka u daruureen baaqyada caalmiga ah ee kootada dumarka. Waxaan ka ogaaday warbixin dhawaan la daabacay in uusan jirin dal ka tirsan Yurub iyo Mareykanka oo dumarka siiyay koota dhan %30. Waxaa hubaal ah in danta ay ka leeyihiin tahay in dumarkeena ay fasaahadiyaan anshaxii suubanaa iyo akhlaaqdii wanaagsaneyd ee lagu yaqaaneyna ka tirtiraan.
5.Warbaahinta Alshabaab Uma Dabaaldegaan 1-da Luulyo, Iyo Munaasabadah Qaranka Iyo Maalmaha Caalamiga Ah:
Waxaan aad uga raadiyey warbaahinada AlShabaab iyo kuwa taageero dabaaldegyo ay u qabteen maalinka xoriyada la qaatay iyo maalmaha caalamka u asteeyay in la xuso. Waxaa aad iigu weynaa dabbaaldega 1-da luulyo oo aan ku garaadsaday yaraanteydii ilaa hada, waxaan in badan is weydiinayey maxey shabaabku ugu dabbaaldegi la’yihiin maalintaas qaranku leeyahay. Waxaan daawaday qeybta 1aad ee filim taxane ah oo ay uga hadlayeen dastuurka Soomaaliya iyo xeerka ciqaabta ma waafaqsanyahay diinta Islaamka mise waa uu kasoo horjeedaa? Waxaan garowsaday ineysan jirin xoriyad la qaatay 60kii, mudanna in loo dabaaldego, waxaan ogaaday in waxa loo dabaaldegayo ay tahay soo dhaweynta iyo xuska 120 xildhibaan oo diiday in shareecada lagu dhaqmo, waxaan xaqiiqsadey in waxaa loo dabaaldegayo ay tahay shareecadoo laga tagey, waxaan weydiistay rabigey inuu iiga dembi dhaafo intaan u dabaaldegay la dirirka diintiisa, waxaa waajib ku ah qofkastoo Soomaali ah inuu xaqqa raadiyo, waxaan ka codsanayaa nin kastoo akhriyo maqaalkeygan inuu rabbi dembi dhaaf ii weydiiyo.
Ugu dambeyn intaan dhageysanayey warbaahinta Alshabaab, khudbadaha madaxdooda, wareysiyada ay bixinayaan saraakiishooda iyo muuqaalada ay baahiyaan marna kuma arag hadalo is burinaya ama is baraanbaraya, in kastoo ay yartahay macluumaadka laga heli karo gudaha warbaahintooda hadana waxaa kuu muuqanaya iney jirto siyaasad mudan in la diraaseeyo oo keeneysa ama suurtagelisay iskaabida wararkooda, wareegtooyinkooda iyo wareysiyadooda.
Alshabaab waxey dunidan oo uu Mareykanku hormuud ka u yahay u aqoonsantay urur argagixiso, dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan degaanada ay ka taliyaana waxey u aqoonsan yihiin Mujaahidiin u dirireysa difaaca diinta, dalka, iyo dadka. Deegaanada ay ka taliyaan waxaa loo yaqaanaa wilaayaadka islaamiga ah, dadka Soomaaliyeed ee ka baxsan degaanadaas ay maamusho markaad weydiisid Alshabaab waxey ka aaminsan yihiin; waxey kuu sheegayaan ineysan dhibaato ku qabin, dad lala dhaqmi karana yihiin, waxey ku tilmaamaan iney shabaabku yihiin dowlad uusan caalamku aqoonsaneyn. Waxaan is iri qofkastoon la aqoonsaneyn maalin baa la ictiraafaa, waxaana tusaale inoogu filan Taliban.
Aragtidan waxaan soo gudbinayaa anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed, doonaya in dalka lagu maamulo diinta islaamka, gumeysi diid ah, diidan in dalka la hoosgeeyo Itoobiya iyo Kenya, kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada shisheeye, xubina hada aan ka aheyn ururka Al-shabaab, argagixisana aanan u aqoonsaneyn.
Abdirizaaq Xaaji Xuseen
5 qodob oo aan looga adkaan karin Ururka Al Shabaab! W/Q Wadaadyare
Maxaad ka Ogtahay Culeyska Dowlada Kenya Uga Yimid Dhalinyarada Shabaabku ka Qorteen Waqooyi Bari Kenya.
Al-Shabaab oo Markii Ugu Horeysay Galay Baxdo Iyo Dagaal Aan Waxba Laysu Reebay oo Halkaas Ka Dhacay [WARBIXIN)
Financial Times: Al-Shabaab ayaa ka faa'ideysanaya isqabqabsiga Maamulada taabacsan reer Galbeedka